CILMI BAARIS – Isuroon Somali
Home / CILMI BAARIS
CILMI BAARIS BEESHA KU SAABSAN
Ilaa iyo kolkii la aasaasayIsuroon, Cilmi Baarista Beesha laga dhex sameynayo [Community Based Research (CBR)]waxa ay ahayd saldhiga iyo garwadeenka shaqadayada. Hay’ada la yiraa Xarunta Baladyada iyo Arrimaha Nawaaxiga[Center for Urban and Regional Affairs (CURA)]ee ka tirsan Jaamacada Minnesota waxa ay ku tilmaamtay (CBR) in ay tahay hawl wada shaqeyn iyo iskaalmaysi ah oo si sinaan ah u hawl galisa dhamaan iskaashatada ka wada shaqeynaysa habka cilmi baarista aqoonsatana itaalka gaarka ah ee qolo walba oo iskaashiga ka mid ahi ay keenayso. CBR waxa ay hawsheedu ka bilaabantaa cilmi baaris ku sameynta mawduuc muhiim ku ah beesha, iyadoo u ayujeedaddu tahay isku xirka iyo isu keenida aqoonta iyo falalka si loo bilo beesha loona dabar gooyokala sareynta daryeelada dadka.
Isuroon waxa ay xiriir is kaashi oo muddo dheer soo jiray la leedahayururkaCURA, sanadkii 2013 waxa ay ka wada shaqeeyeen mashruuc cilmi baaris ah oo afti ka qaaday haween Soomaaliyeed oo tiradeedu ahayd 104, kuwaas oo walaacyada waaweyn ee ay sheegteeni aydhidibada u aaseen qorshaha Isuroon ee ku wajahanaa ballaarinta hawl galkeeda oo ay ku jireen arrimo la xiriiray Caafimaadka iyo fayoobida haweenka Soomaalida.
Sannadkii 2012, waxa aan wada shaqeynay cilmi baare ka tirsan Jaamacada San Francisco(University of San Francisco) baaritaankaas oo la xiriiray caafimaadka xubnaha taranka ee haweenka Soomaalida ah waxaana ka soo baxay cilmi baaristaahabraac daryeel oo dhaqan ahaan quman oo daryeelayaasha haweenkaa iyaga ahi ay hadda isticmaalaan.
Markii hadda ugu dambeysay,Isuroon waxa ay iskaashi la sameysay Xarunta ka Wada Shaqeynta Kansarka ee Minnesota (Minnesota Center for Cancer Collaborations)si loo eego xeelado lagu sii hagaajin karo kordhinta tirada haweenka Soomaalida ah ee deegaanka ee iska baarta cudurka kansarka. Ka dib kolkii lagu guulaystay qabashada fadhiyo wacyi gelin ah oo aarrintaa laga yeeshay ayaa waxaa kordhay tirada haweenka ka qayb galayaasha fadhiyadaa ka midka ahaa ee iska baartay kansarka naasaha, Isuroon waxa ay ku hawlan tahay sameynta iyo tijaabinta manhaj dhaqan ahaan gaar ah oo ku saabsan ka hor tagida kansarka minka. Kolka nidaamkan wax barida ah ee aan wadno la laaxin tiro lana sugo, waxaan rajaynaynaa in aan la wadaagno dhamaan beelaha kale ee Soomaalida ah ee ku dhaqan wadanka U.S. ka oo dhan.
Hadii aad tahay:
Cilmi baare doonaya in ay iskaalmaystaan Isuroon
Bixiye daryeel caaafimaad ama mas’uul doonaya tababarid ama helid macluumaad u gaar ah Soomaalida
Naga soo wac khadka ah: 612-886-2731